लकडाउनमा पनि दलितमाथि निरन्तर अत्याचार
विश्व कोरोना भाइरसले आतंकित बनाइरहेको अवस्था छ । विश्वभर ३ लाखभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने ४३ लाख मानिश सक्रमित भइसकेका छन् ।
यो लेख लेखिरहँदा नेपालमा पनि कोरोना जस्तो महामारीले करिब २८१जना मानिसहरु सक्रमित भइसकेका छन् ।
जसमध्ये ३६ जना मानिश निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ भने १ जनाको ज्यान गएको छ । १ नं.प्रदेशको झापा जिल्लामा सार्की थरका एक दलित कोरोनाबाट संक्रमितभएका छन् ।
लकडाउनको अवस्था छ । जनता घरबाहिर ननिस्कँदापनि जातीय छुवाछूत र विभेद बढिरहेको छ । लकडाउनको गम्भीर अवस्थामा पनि दलितहरु विभेद भोग्न बाध्य छन् ।
धेरै दलित चेलीहरु असुरक्षितभएका छन् । धेरै दलित सानो जातभएका कारण गैरदलितबाट छुवाछूत जस्तो शोषण भोग्न बाध्य हुँदापनि राज्यले गतिलो कदमचाल्न सकेको छैन ।
गत २०७६ चैत्र ११ देखि हालसम्म ७ वटा जातीयविभेद तथा छुवाछूत र दलित बालिकाहरुमा बलात्कार,जबरजस्ती करणी जस्ता घट्नाहरु घटेका छन् जसले दलित समुदायहरुलाई दुःखीबनाएको छ ।
लकडाउनमा विभेद गर्नेले झन् राम्रो अवस्थामा के गर्लान् ? सर्वत्र चिन्ता र चासोको विषयबन्नपुगेको छ । यी घट्नाहरुलाई सारांसमा जानकारी गराउन लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
१.मोरङ्ग मिक्लाजुङ्ग – ९ मा १४ वर्षीयादलितबालिकाबलात्कृत
गतवैशाख १९ गते रातको १२ बजे १४ वर्षीयादलितबालिका घरभित्र सुतिरहेको अवस्थामाबलात्कृत भएकी छन् । घरमा कोहीनभएको अवस्थामा सुनसान रातमा पीडक अभियुक्त धिरेन मगरले बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरे ।
बालिकाचिच्याउँदा छरछिमेकीले थाहापाई, पीडकलाई पक्राउ गरेपनिअर्को दिन बिहान प्रहरीमाजाने सर्तमा सुनियोजित ढंगले पीडकलाई छोडियो । पीडक फरार भयो ।
पीडित बालिकाको बुबाले प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरे ।पीडकधिरेन मगरलाई प्रहरीले ९ दिनपछि आफन्तको घरमा लुकिरहेको अवस्थामापक्राउ गरी मुद्दाको प्रक्रियाअगाडि बढाएको छ भने पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणभई मोरङ्ग विराटनगरमा एक गैरसरकारी संस्थाको सेफ हाउसमा छिन् ।
२. मोरङ्गं पथरी शनिश्चरे–८ की १७वर्षीयादलितबालिकालाई जबरजस्ती करणी
मोरङ्ग पथरी शनिश्चरे– ८ की १७वर्षीयादलितबालिकालाई डर त्रास र धम्की देखाई,पटकपटक जबरजस्ती करणी गरी ५ महिनाको गर्भवती बनाएका राजन लिम्बुलाई बालिकाको तर्फबाट मुद्दा दर्ता गरी पक्राउ गरिएको छ ।
म्यादथप गरी मुद्दाको प्रक्रियाअगाडि बढाइएको छ भने पीडित दलित बालिकाको कोशीअञ्चल अस्पत्तालमा स्वास्थ्यपरीक्षण गरी विराटनगरमा उपचारसमेत भइरहेको अवस्था छ ।
३..धनकुटामा १४ वर्षीयादलितबालिकालाई जबरजस्ती करणी
त्यसैगरी मोरङ्ग पथरी शनिश्चरेको जस्तै धनकुटा नपा –८ आत्मराकी १४ वर्षीया दलित बालिकालाई डर,त्रास,धम्की देखाई पटकपटक बलात्कार गर्ने ४ जनाको संख्यामा समाजका अति प्रतिष्ठित व्याक्तिहरु परेको खबरले त झनै चिन्तित बनाएको छ ।
विगत ५ महिना अघिदेखि जबरजस्ती यौन सम्पर्क गरी बालिकाको ५ महिनाको गर्भ बसेपछि घटनाको रहस्यबाहिर आएको थियो ।
उक्त घटनाका पीडकहरु समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु,धनकुटा गोकेण्डेश्वर माविका शिक्षक मदनअधिकारी, होटल व्यवसायीगौरी आत्री, देबेन्द्र श्रेष्ठ र भक्त मगर रहेका थिए ।
बालिकाको तर्फबाट उनका आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटामा जाहेरी दर्ता गरी, आत्री, श्रेष्ठ र मगरलाई घट्ना दर्ता भएको ६ घण्टा भित्र पक्राउ गरिसकिएको छ भने घट्नाका ठूला माछा भनिने फरार रहेका शिक्षक अधिकारी शनिवार विज्ञप्ती जारी गरेर प्रहरीको शरणमा पुगेका छन ।
पीडित बालिकाको धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणभई सुरक्षित स्थानमा रखिएको दलितपत्रकार संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष नैन रुचालज्युले बताउनु भएको छ ।
४.सार्वजनिककिरिया–पुत्रीभवनदलितलाई प्रयोग गर्न दिइएन
लकडाउनको बेला पोखरा उपमहानगरपालिका बाटुलेचौरका मोहन सुनारका भाइको मुत्यु भयो । मृत्युपछि सबैको,स्वाभाविक रुपमा मृत्यु संस्कार हुन्छ ।
मृत्यु संस्कारपछि किरिया–पुत्री बस्ने सार्वजनिक भवनमा किरिया बस्न खोज्दा,दलितभएकै कारण सामुदायिक भवन प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरिएको छ ।
उक्त घटनामा पोखरामा रहेका दलित संस्थाहरु,दलितअधिकारकर्मी लगायतले लकडाउनमा नै प्रशासनका अगाडि आन्दोलन र संघर्ष गरे ।
केहीदलित र प्रहरीहरु समेत घाइते भए । उक्त घट्नालाई लिएर सोहीप्रदेशका सभासद कृष्ण बहादुर थापाले दलित समुदायलाई विपक्षीबनाएर,उक्त घट्ना अतिरञ्चितभएको,उच्श्रृङखलभएको भनीपीडकलाई बचाउने खालको प्रेस विज्ञप्ती निकाले ।
यसले झन्दलित समुदायलाई निरुत्साहित बनायो । सभासद जस्तो व्यक्तिले नै छुवाछूतको घट्नालाई बढावा दिएपछि आन्दोलन अनलाइनबाटै भएपनि देशव्यापी बन्यो ।
पीडितको तर्फबाट मृतकका दाजु मोहन सुनारले प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिएका छन् । घट्नाकापीडकहरु देवबहादुर थापा,जनक थापा,राम जिसी लगायतलाई जनही १ लाख ७० हजारका दरले जिल्ला अदालत कास्कीबाट धरौटी लिई रिहा गरिएको र मुद्दाको पक्रियाअगाडि बढेको कुरा अधिवक्ता शिवबहादुर सुनारले बताए ।
५.दलित गैरदलितको घरभित्र पस्दा १५ सय जरिवाना
गुल्मीको कालीगण्डकी नपा– ५ फोक्सिङमा दलितमाथि अमानवीय कार्य गरिएको छ । दलित भएको कारण उच्चजातिको घरभित्र पस्दा १५ सय जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।
वैशाख २२ गते फोक्सिङ साँगा साविकको वडा नं– ८ मा माया परियारको मुत्यु भएको थियो ।दाहसंस्कारको लागिखानीगाउँ देउरालीबाट मृतकका आफन्तजन धनबहादुर र कौसिला परियारका छोरा श्याम परियार र अन्य केही साथीहरु साँगागए ।
त्यहाँ त्रिवेणी घाटमा दाहसंस्कार सकी फोक्सिङ फर्कने क्रममा हुरी बताससँगै ठूलो पानी परेकोले बाटोमा पर्ने नेत्र काउछाको घरमा ओत बसेका थिए ।
उक्त घरको बरण्डामा ओत बसेको र निरन्तर हुरी बताससहित परेकोपानीले रुझाएपछि बरण्डामा बस्न नसकीश्याम परियारका साथीहरु घरभित्र पसेका थिए ।
घरवालाउच्चजातिको रहेको पाइएको छ । दलित घरभित्र पसेर अपवित्र भएको र घरलाई पवित्र गराउन पूजापाठ गर्नुपर्छ भन्दै फोक्सिङ रिम गाउँका नेत्र काउछा,बुद्धिजीविलगायतअन्य स्थानीयबासिन्दाले वैशाख २२ गते बेलुका बैठक राखी सुरुमा सात हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्दै दबाबदिएकाथिए।
तर अन्त्यमा १५ सय जरिवाना रकम हस्तन्तरण गरिएको घटनाका पीडितले बताए । उक्त घटनाको पीडकलाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्तभएको छैन ।
६.सोलुदुधकुण्डमा जनजातिमहिलाले जातीयविभेद गरिन्
सोलुदुधकुण्ड नपा– ११ तिङलाको भदौरे तिङ्लामा गत शनिबार वैशाख २५ गते सार्वजनिक बाटोमा हिँड्दै गरेका मिनबहादुर परियारलाई संगीता राईले मेरो अगाडि हिँड्छस्तँ दमाई ? भनेर ढुङ्गाले हिर्काउँदै लखेटेकीथिइन् ।
उक्त घट्ना घटेको केही समयपछि पीडित मीनबहादुर परियारले नजिकको प्रहरी कार्यालय सोलुदुधकण्डमा जाहेरी दिएपछि पीडक संगीता राईलाई पक्राउ गरी जातीयविभेद तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसारको मुद्दा पक्रिया अगाडि बढेको कुरा प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र दर्नालले बताए ।
७. कास्कीमाअन्तरजातीयविवाह गरेको कारण क्रिया बस्न दिइएन
पोखरामा एक दलित महिला विवाह गरेका कारण सो गाउँका पुरै समाज भेलाभएर गैरदलित केटालाई आफ्नो आमामर्दा पनि काजक्रिया गर्न दिएनन् । कस्तो बिडम्बना त्यसमा एउटै कारण थियो दलित समुदायकी केटीसँग विवाह । विवाहकै कारण समाजबाट उनलाई बहिष्कार गरिएको यस घट्नाको बारेमा बृहत रुपमा बुझ्न पाइएको छैन ।
यसरी लकडाउनको अवस्थामा पनि जातीय छुवाछूत र विभेद गर्न यस राज्यका गैरदलितवर्गहरुले छोडेका छैनन् ।हामी एकछिन कल्पना गरांै त अझै सहजअवस्थामा छुवाछूत कतिधेरै छ होला? त्यसकारण समाजबाट जातीय छुवाछूत र विभेद हटेर जान्छ भनेर कल्पना गर्न नै सकिने आधार तय भएको छैन ।
दलित समुदायहरुमा यस्तो घडीमा ७ वटा घट्ना घट्नु भनेको विडम्बना हो । सरदर आधार मान्दा ४५ दिनको अवधिमा७ वटा,त्यसमाथि पनि ३ जना बालिकाहरुलाई बलात्कार गरिएको दर्दनाक घट्नाहरु समेत भएका छन् ।
सबै घटनाहरुदलित समुदाय भित्रमात्र घटेका छन् । भनेपछि दलित समुदायलाई कमजोर, दुर्बल र पहुँचनभएको ठानी यी यस्ता घट्नाहरु भएका छन् ।
कतै हाम्रो कमजोरीको फाइदा उठाएका त हैनन् ? राज्यले नै बेवास्ता गरिदिनाले त्यसको शिकार दलित समुदायभएका छन् ।
कमजोर जहाँ छन् त्यहाँ आक्रमण बढी हुने गरेको सोझै अनुमानलगाउन सकिन्छ । यो किनभइरहेको छ ? कतै हाम्रो एकताको आन्दोलन कमजोर भइदिँदा र राज्यले जारी गरेको ऐन नियम,कानुनहरुलाई कार्यान्वयन नगर्दाको प्रतिफलत होइन?
आजदलित समुदाय दिनानुदिन राक्षसहरुको शिकार भइरहेको र सानो गरिब निम्नवर्गको ठानी पेलेर छुवाछूत गरिएको छ ।
अब हामीअझै चुपलागेर बस्ने हो भने सबै दलित समुदायको घर घरमा यो छुवाछूत कोरोना भाइरस झैंबन्ने छ । हुन त अहिले पनिकुनगतिलो छ र ? छुवाछूत त दलितले भोगेकै छन् तर अझतीव्र रुपले जानेछ ।
त्यसकारण अब हामी चुपलागेर नबसौं,सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जे जस्तो सकिन्छ दबाबदिऊँ । चाहे त्यो अनलाइन,फेसबुक,भाइबर,म्यासेन्जर,इमो,टेलिफोन,मोबाइलबाट नै किननहोस्, देशभरका दलितहरुले सशक्त आवाज उठाआंै । लकडाउन सहज भएपछि सडक तताऔंर राज्यलाई खबरदारी गरौं ।
सँधैभरि पशु समान भएर हामीले भोग्दै आएको विभेदको क्षतिपूर्तिसहित अन्त्य गर्नका लागिहामीआजैबाट सशक्तहुन जरुरी छ ।
लेखक, अधिकारकर्मी हुन्